Abanye Abakhiqizi | I-China Abanye Ifektri Nabathengisi
I-Dimple Lock Bump Gun
I-Dimple Lock Bump Gun (aka. I-Dimple Pin Bump Key Gun Set) ifaka ama-blades ayi-10 jikelele ezilinganisweni zamasilinda amaphini ayisisekelo omugqa owodwa wezikhonkwane ngakwesokunene noma ngakwesobunxele. Amandla alungile amaqhubu kanye nebanga elilungile lokunyakaza kwensimbi kungalungiswa. Inqubo yokuphumelela ye-bump key incike ezintweni eziningi. Ngakho-ke kuyadingeka ukwenza uhlobo lokungqongqoza olinganiswe kahle futhi oluhlukanisiwe. Okuthiwa yiBump Key Technology kwenza wonke umuntu avule ...
I-H & H 10 Dimple Lock Pick
I-H & H 10 Dimple Lock Pick Set ihlanganisa izitayela ezi-10 zokukhetha ezihlukene ezi-2 ezihlukene, kufakwe namathuluzi amabili wokungezwani. Izibambo zokukhetha zenziwe ngepulasitiki eluhlaza, ebushelelezi futhi eqinile, futhi kwisibambo ngasinye sokukhetha sinenombolo engu-1-10 ngenhloso yokuhlonza okulula. Okufakiwe: Izitayela zokukhetha eziyishumi ezi-dimple ezihlukene zokujiya okungu-2 okuhlukile. Amathuluzi wokungezwani ama-2 Afika anikezwe nge-shell enhle ethambile ye-shell H & H, uhlobo lwekhwalithi ephezulu! Inqubo ye-oda Bhalisa i-akhawunti nge-imeyili yakho - Ngena ...
Ukukhethwa kwe-HUK Red Tiger Lock
I-HUK Red Tiger Lock Picks iyisethi enhle kakhulu yokukhethwa kwenhloso ejwayelekile yokukhiya, ikhi ngayinye yokukhiya inesibambo sokusingatha esibamba kakhulu sezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene. Lokhu kusethwa kuqukethe ukukhethwa kwe-hook, ukukhethwa okuncane, ukukhethwa kwe-rake, okhipha okhiye abaphukile kanye nama-wrench wrench. I-HUK Red Tiger inikeza ukukhethwa kwamapiki enziwe kahle futhi enzelwe wonke amazinga wokukhiya ukukhiya. Ukuba nokuhlukahluka okunjalo kusethi eyodwa kwenza lokhu kube isethi yenhloso ejwayelekile ekahle. Inqubo ye-oda Bhalisa i-akhawunti nge-imeyili yakho ...
IGOSO 7 Pin Tubular Lock Pick iza nezicucu ezi-3 ezilingisa osayizi abathathu abajwayelekile ozibona laphaya endle. Ukukhetha ngakunye kulungiswa ngokuphelele ukuze ukwazi ukukwenza kunoma yikuphi ukujula okudingayo. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba imvamisa abakhiqizi abahlukahlukene bazosebenzisa izingidi ezijulile noma ezingajulile ngokuya ngomshini. Osayizi abathathu leli sethi eliza nabo lingu-7mm, 7.5mm, no-7.8mm. Siyakwazi ukukhetha izingidi eziningi eziyizigaxa ngaphakathi kwemizuzwana engama-30. Ukubeka le tubul ...